Vaovao - inona ny panneaux solaires 9BB
9BB antsasaky ny sela manapaka sela
9BB sela antsasaky ny mono mainty rehetra 450w
9BB antsasaky ny sela 350w-375w
9BB antsasaky ny sela mono 370w
9BB antsasaky ny sela mono 430w
9BB antsasaky ny sela mono 420w-445w
5BB antsasaky ny sela manapaka sela
5BB sela 120 mono 310w-335w
5BB sela 120 poly 270w-290w
tontonana mandeha amin'ny masoandro mahazatra
36 sela mono panamasoandro mono 165w175w190w
36 sela poly panneaux solaire 150w160w170w
Tela-masoandro 48 sela tontonana solar 230w240w250w260w
48 sela poly panneaux solaire 200w210w220w230w
60 sela mono tontan'ny masoandro 290w310w320w
60 sela poly tontonana masoandro 260w270w280w290w
72 sela mono tontonana solar 350w360w380w390w
72 sela poly panneaux solaires 310w330w340w350w
Tela-sela 96 mono tontonana amin'ny masoandro mono 460w470w480w490w500w
96 sela poly tontonana avy amin'ny masoandro 420w430w440w450w460w
Panels amin'ny habeny kely
takelaka kely poly poly kely 20w
takelaka kely poly kely 50w
tontonana kely monja mono 45w60w75w90w
tontonana kely poly masoandro kely 40w50w65w80w
haben'ny masoandro mono habeny kely 105w120w130w150w
tontonana kely poly masoandro kely 110w120w130w
inona ny panneaux solaires 9BB
Ao amin'ny tsena farany teo, henonao ny olona miresaka momba ny sela masoandro 5BB, 9BB, M6 karazana 166mm masoandro ary ny tontolon'ny masoandro tapaka. Mety hafangaro amin'ireo teny rehetra ireo ianao, inona izany? Inona no ijoroan'izy ireo? Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'izy ireo? Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava fohifohy ny hevitra rehetra voalaza etsy ambony isika.
Inona ireo 5BB sy 9BB?
5BB dia midika hoe bisy fitateram-bisy 5, ireo no bara-volafotsy manonta fanonta lamba eo amin'ny tampon'ny selan'ny masoandro. Ny bisy fitateram-bahoaka dia natao ho mpitarika mitondra herinaratra. Ny isa sy ny sakan'ny bara fitateram-bahoaka dia miankina amin'ny haben'ny sela sy ny fahaizany natao. Raha jerena ny fepetra tsara indrindra sy ny teôlôjia milaza, ny fitomboan'ny bara fitateram-bahoaka, ny fitomboan'ny fahombiazana. Na izany aza, amin'ny tena fampiharana dia sarotra ny mahita teboka tsara indrindra toy izany izay mandanjalanja ny sakan'ny bara fitateram-bahoaka ary mampihena ny aloky ny tara-masoandro. Ampitahao amin'ny sela 5BB izay manana habe 156.75mm na 158.75mm normal, ny sela 9BB dia mitombo amin'ny isan'ny bara roa sy ny haben'ny sela izay 166mm amin'ny ankamaroan'ny tranga, ankoatr'izay, 9BB dia mampiasa fantsom-bozaka boribory hampihenana ny alokaloka. Miaraka amin'ireo teknika vaovao nohatsaraina rehetra ireo, ny selan'ny masoandro 166mm 9BB dia mampitombo be ny vokatra azo.
Inona avy ireo tontolon'ny masoandro maty tapaky ny sela?
Raha esorintsika amin'ny antsasaky ny masinina vita amin'ny laser ny haben'ny masoandro feno habeny, atsofoka ao anaty andiana tadiny sy tariby roa ny sela antsasaky ny sela, ary farany fonosin'izy ireo ho toy ny tontolon'ny masoandro. Mijanona ho mitovy amin'ny herinaratra, ny ampere am-boalohany sela dia mizara roa, ny fanoherana herinaratra dia mitovy, ary ny fatiantoka anatiny dia ahena ho 1/4. Ireo antony rehetra ireo dia mandray anjara amin'ny fanatsarana ny vokatra rehetra.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny valin'ny masoandro 166mm 9BB sy antsasaky ny sela?
1: Ny antsasaky ny sela dia manatsara ny herin'ny tontolon'ny masoandro manodidina ny 5-10w.
2: Miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra, nihena 3% ny faritra fametrahana ary nihena 6% ny vidin'ny fametrahana.
3: Teknika antsasaky ny sela no mampihena ny loza ateraky ny vaky ny sela sy ny fahasimban'ny bisy fitateram-bahoaka, noho izany mampitombo ny fitoniana sy ny fahatokisan'ny tara-masoandro.
Fotoana fandefasana: Sep-07-2020
Address: Rm 1603, 99 Zhongshan Rd, Nanjing, Sina